Ireo endrika atiny B4B 2 mahomby indrindra? | Martech Zone
Tsy gaga izahay ny valin'ny Tatitra momba ny famaritana mari-pahaizana momba ny marketing 2015. Izahay dia nanova ny saika rehetra nifantoka tamin'ny fampitomboana ny tsena, ny fanentanana ny marika ary ny fanatsarana ny fanovana eo amin'ny fahefana ao anaty fa mivoatra ho an'ny mpanjifanay izahay. ny Fitaovana ambony momba ny varotra B2B dia:
Case Studies - Ankoatry ny fampiroboroboana ny marikao, ny fandinihana tranga dia manome fomba mahomby amin'ny fitantarana tantara momba ny mpanjifa iray izay hisoratra anarana amin'ny prospect hafa amin'ny indostria mitovy na miatrika fanamby mitovy amin'izany. Ny fandalinana tranga dia manome ny lafiny rehetra amin'ny atiny lehibe - ao anatin'izany ny tantara, angon-drakitra manohana, topimaso momba ny vokatra na serivisy, fijoroana vavolombelona, ​​ary koa ny fiantsoana hanao hetsika.
Videos - Mitentina 1.8 tapitrisa ny vidin'ny horonan-tsary. Ity dia fanambarana feno fahasahiana avy amin'ny fandalinana Forrester an'ny Dr. James McQuivey Ahoana ny fomba handraisan'ny horonantsary an'izao tontolo izao. Ny fahaizana misoratra anarana amin'ny fihetsiketsehana sy ny fahitana ary manazava miaraka amin'ny alàlan'ny feo dia manampy amin'ny famaritana sy ny fanazavana tsara lavitra noho ny lahatsoratra na sary. Ny horonan-tsary dia tsy natao hakamoan'ny olona hamaky… fa ho an'ny olona maniry hitazona haingana sy hahatakatra vaovao misimisy kokoa.
Whitepapers - Raha toa ny tanjon'ireo mpanjifanay dia ny hihaino ny mpihaino dia tsy maintsy manampy amin'ny fanabeazana azy ireo koa izy ireo. Ny taratasy fotsy dia mampahafantatra sy manabe ny mpamaky miaraka amin'ny fametrahana ny orinasanao ho fahefana amin'ny lohahevitra. Ny fahitana anao ho manam-pahefana dia manangana fifampitokisana ary ny fifampatokisana dia mitarika fiovam-po.
an-tsary - Ity ny tetikadinay goto ho an'ny mpanjifa tsirairay izay manohy mandoa dividends hatrany hatrany hatrany hatrany hatrany. Rehefa mahita ny mpanjifa manandrana manangana fahatsiarovan-tena sy fametrahana fikarohana voajanahary izahay dia tsy misy tetika miasa tsara noho ny anay programa infografika. Mijery orinasa marobe mianjera amin'ny tarehin'izy ireo izahay… manaparitaka statistika vitsivitsy fotsiny amin'ny interface tsara, fa rehefa manamboatra ny tantara ianao, manangona ny fikarohana, ary manamboatra infographic izay manampy amin'ny fitarihana ny sain'ny mpijery ary manampy azy ireo hamaha olana iray, tsy misy endrika tsara kokoa. Azo entina ny infografika… mora ampidirina sy zaraina hatraiza hatraiza. Ity ny zanakay!
Orinasa maro no gaga amin'ny sticker raha mandany ny atiny premium. Izany no antony anampiantsika azy ireo hamerina ny endriny eo anelanelan'ny endrika ary averinay koa ny mpanjifanay. Taratasy infografika sy fotsy na fandinihana tranga iray no azo ampiasaina hamelomana bokikely, fampisehoana varotra, sary an-tranonkala, lahatsoratra bilaogy, podcast, webinar… ary maro hafa. Raha tsy mamerina mamoaka an'ity atiny ity ianao dia tsy tsapanao ny fahafahany feno. Ary raha tsy ampiasainao mihintsy, dia taraiky ny mpifaninana aminao ianao.
The Tatitra momba ny famaritana mari-barotra momba ny atiny 2015 manome fanadihadiana farany momba ny fironana varotra atiny lehibe indrindra amin'ny fikambanana B2B, ary miorina amin'ny tetik'asa fikarohana manokana izay natao niaraka tamin'ny Fikarohana faribolana tamin'ny Mey / Jona 2015.
Ity misy teaser mpampifandray tsara iray izay B2B Marketing natambatra (azonao atao ny mametaka ny bokotra efijery feno mba hifandraisana mora kokoa):
Ary ity misy infographic misy ny paikady B2B Content atiny ambony sy angona mpanohana sasany:
Tags: 2015b2b marketingtranga fanadihadianafikarohana faribolanaTatitra momba ny famaritana mari-pahaizana momba ny marketingboky misosaAtsimbadiho ny atinyfampahalalana saryMarketing Infographicsturtlhoronan-tsarywhitepapers
Ny vidiny lafo amin'ny tsy fahombiazan'ny famoronana tranonkala dia mahazatra loatra
Storyworks1: Sehatra fanaterana atiny fivarotana nomerika an-toerana